(src)="3.7"> Rehefa jerena ihany koa dia tsy misy zava-baovao loatra mikasika ilay taratasy , na ilay hajia .
(src)="3.8"> Azavain 'ny About.com fa efa nivezivezy teny hatrany ity taratasy ity hatramin 'ny taona 2002 raha kely indrindra , nefa efa tamin 'ny 1 Septambra 2001 no nivoahan 'io hajia io .
(src)="7.1"> Na iza na iza dia afaka mandray anjara amin 'ny Blog Action Day amin 'ny 15 Oktobra , na amin 'ny blaogy izany , na amin 'ny gazety anaty aterineto na gazetiboky .
(src)="3.1"> Ny mpitoraka blaogy Lord-Fame dia novangian 'ireo tomponandraikitry ny hetra izay nanambara fa tsy ampy araka ny tokony ho izy ireo mpiasa ao amin 'ny orinasany , ambanin 'ny “ salanisa ho an 'ny orinasa ”
(src)="3.2"> Iza no tsisy saina nahita izany fitsipika izany ?
(src)="3.3"> Hatraiza ny hadalanao ka hametrahanao ireo orinasa REHETRA ho anaty lasitra iray mitovy ?
(src)="3.4"> Mbola mikasika ny sehatra ara-ekonomika ihany , Thousand-pa dia tsy mahazo hoe nahoana , na dia teo aza ny filazana entin 'ny fanjakana , no nolavin 'ireo tomponandraikitra ny volavolan-kevitra mikasika ny hanondrotana ny karaman 'ireo mpiasan 'ny fikambanana izay vatsin 'ny fanjakana vola :
(src)="3.5"> Inona no antony ilazana fa tapitra ny krizy raha toa ka afaka iray volana aty aoriana dia ho mbola io krizy teo aloha io ihany no teti-dratsy ampiasaina mba hahafahana miverina amin 'ny fampanantenana taloha ?
(src)="3.6"> D-lov dia miahiahy ny tsy fahampian 'ny ady hevitra ao Kazakhstan mikasika ny fanararaotana ara-nofo any ampiasana :